How to studyaprogramming language? – EasyDevBoards
Home / Arduino / How to studyaprogramming language?
Programming Language တခုလေ့လာပြီးဆိုလျှင် ဘယ်လို တတ်မြောက်အောင် လေ့လာမှာလဲ? သူများ ရေးထားတာကို အမြဲတမ်း ကူးသာ နေရတယ် ဘာမှန်း မသိဖြစ်နေသလား? ထည့်စဥ်းစားရပါမယ်။ ဘယ် ဘာသာ စကား ကို လေ့လာ လေ့လာ သူများ ပြောတာ နားထောင် နားရည်ဝလာ သလို နောက်ပိုင်း မသိတာတွေ ကို Dictionary ရှာဖတ်ကြည့် သလိုပါပဲ။ Programming Language တခုလေ့လာတဲ့ အခါ ထိုနည်းကို ပဲ သုံးရပါတယ်။
Programming နမူနာတွေကို များများ လိုက်ဖတ်ပါ။
သူများ Code တွေကို သူတို့ အတိုင်းပဲ Run ကြည့်။ သူတို့ ပြောထားတဲ့ အတိုင်း အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။ အလုပ်မလုပ်ရင်တော့ ကိုယ် ဘာမှားနေလဲ လိုက်ရှာပါ။
အားလုံးမှန်ပြီးဆိုရင်တော့ သုံးထားတဲ့ Function တခုချင်း စီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲ ကို လိုက်ရှာဖတ်ပါ။
နားလည်ပြီး ဆိုရင် မိမိ စိတ်ကူးရှိသလို ရေးနိုင်ပါပြီး။
ကျောင်းသားတော်တော်များများက နံပါတ် ၂ မှာပဲ ရပ်နေတတ်ပါတယ်။ သူများ Code တွေကို ကူးပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါ ပျော်နေတတ်ပြီး မိမိအတွက် ဆက်မလုပ်ကြတော့ပါဘူး။ Code တွေကို Copy ကူးတဲ့ နေရာမှာ ရပ်တန့်နေရင် Programming Language ကို တကယ်တတ်မြောက်တယ် မခေါ်ဘူး။ တကယ်တတ်အောင် နံပါတ် ၃ အဆင့်ဖြစ်တဲ့ Function တခုချင်း စီရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို သူ့ရဲ့ Reference Documentation တွေ မှာ ရှာဖတ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒိ Documentation ကို API (application programming interface) လို့ လဲ ခေါ်ပါတယ်။
Arduino ရဲ့ Reference ကို ဒီလင့် မှာ တွေ့နိုင်ပြီး မြန်မာလို ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီလင့်မှာ တချို့ တဝက် ရေးပေးထားပါတယ်။
C++ Programming language ကို တော့ http://www.cplusplus.com/ မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Example တချို့ လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Function တခုကို ဖတ်တဲ့ အခါ သူ့ရဲ့ input က ဘာလဲ နဲ့ return က ဘာလဲကို အဓိကထား ရှာဖတ်ရမှာပါ။ အထဲမှာ ဘာဖြစ်နေလဲ သိပ်သိနေစရာ မလိုပါဘူး။
Arduino နဲ့ digitalRead() ကို သွားကြည့်ရအောင်။
digitalRead(pin) လို့ ဆိုတာကြောင့် ဒီ Function မှာ pin ကို Input အနေနဲ့ ထည့်ရပါမယ်။ ဘယ် pin က ဖတ်ချင်တာလဲပေါ့။ return က ပါလဲ။ High Or Low တခုခု ပြန်ရမယ်။ ဒါမျိုးလေးသိရင်ပဲ programming ရေးလို့ ရနေပါပြီး။
ဒီ Post ဖတ်ပြီး Programming Language တွေရဲ့ Function တွေကို ဘယ်လို ဖတ်မလဲ အကြမ်းဖျင်း သိရှိသလို API ကို ဘယ်လို ဖတ်ရမလဲကို ပါ လမ်းညွှန်ပြထားတာပါသည်။
CIRCUITMAKER JUNE 2017 DESIGN CONTEST